Apple - Izaho dia Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 17)
Tsy zava-dehibe amin'i Apple intsony i Jimmy Iovine
Na dia tsy handao ny orinasa aza izy amin'ny farany araka ny tsiliantsofina tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia tsy hanana andraikitra ao anatin'ny Apple Music intsony i Jimmy Iovine.
Ny isan'ireo fiara mizaka tena an'i Apple dia 45
Hatramin'ny volana aprily 2017, ny orinasa monina ao Cupertino dia nanitatra ny isan'ny fiara izay manandrana ny rafitra mitondra fiara mizaka tena, nanomboka tamin'ny 3 voalohany ka hatramin'ny 45 ankehitriny.
Mampahafantatra an'i Joplin, izay soloina an'i Evernote
Joplin dia fampiharana an-tsoratra izay isaina ho hatsaran'ny kinova multiplatform, loharano misokatra ary malalaka ankehitriny
Apple Pay dia manohy manitatra ny isan'ny banky any Etazonia, Italia ary Espana
Ny isan'ny banky mifanaraka amin'ny Apple Pay any Espana, Italia ary Etazonia dia manitatra ny isan'ny banky mifanaraka mifanaraka aminy, banky izay hifanaraka tsy ho ela.
Ahoana ny fametrahana ny volavolan-dalàna amin'ny finday ho toy ny fomba fandoavam-bola amin'ny fividianana fampiharana amin'ny Mac
Te hanana ny fividianana iTunes, iBooks, App Store, Mac App Store na Apple Music anao va ianao? Mamela maodely anao izahay hanaovanao ny fanovana amin'ny Mac
Manaova fanovana ao amin'ny Dock miaraka amin'ny app eDock 3 ho an'ny macOS
Ny rindrambaiko cDock 3 dia havaozina amin'ny endrika vaovao sy ny fanitsiana bibikely. Ny fanitsiana ny Dock amin'ny tiantsika dia azo atao ary mahazo vokatra ianao
Podcast 9 × 26: Amin'ny farany dia manana hetsika isika amin'ny volana martsa
Herinandro iray hafa dia manana fizarana vaovao amin'ny #podcastapple izahay. Nandritra ity herinandro faramparany ity dia nahita ny fanambaràn'i Apple ny ...
Ny "Apple Campus 3" dia aseho efa vita amin'ireto sary ireto
Ary io dia Apple efa niasa ela tao amin'ity campus ity ho an'ny mpiasa ao aminy. Momba ny…
Apple dia namoaka ny beta fahenina amin'ny tvOS 11.3 ho an'ny mpamorona
Tonga ny beta fahenina amin'ny tvOS 11.3 ho an'ny mpamorona, hatreto dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny playback sy ny AirPlay2 ny vaovao
West Virgnia dia manatevin-daharana ny club club miaraka amin'ny mombamomba ny fitateram-bahoaka
Ny fanjakana farany any Etazonia izay efa nanolotra vaovao momba ny fitateram-bahoaka dia i West Virginia, izay nisy tanàna telo vaovao nanatevin-daharana ny antoko.
Ahoana ny fomba hanehoana ny menio fanitarana namboarina ho default
Raha te hiditra default amin'ny tontonana fanontam-pirinty nitarina ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba ahafahantsika manao azy io haingana sy tsy misy fahasarotana.
Sabadell sy Bankia dia efa miseho amin'ny lisitry ny mifanaraka amin'ny Apple Pay
Apple Pay dia manohy ny fanitarana eto amin'ny firenentsika amin'ny fomba miadana kokoa noho ny maro amintsika izay maniry fa tsy tapaka, ...
Hisokatra ny 7 aprily ny fivarotana Apple Tokyo Vaovao
Na dia efa manana ny masontsika aza isika amin'ny hetsika manaraka amin'ny 27 martsa, dia manohy ireo milina an'ny ...
Na dia mampiseho antsika mino izany aza izy, dia manana milina anatiny tena mazava i Apple ary raha mandeha amin'ny vaovao isika ...
Ny fanontaniana lohateny dia mety ho hafahafa raha jerena amin'ny tranga Apple tamin'ny volana ...
Raha manana olana ireo peripheraly mifandraika amin'ny Mac, dia mety ho voavaha ny olana amin'ny alàlan'ny famerenana ny modely Bluetooth. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy, ary koa ireo fiasa hafa
Tesla dia nanisy fomba fandoavam-bola vaovao hahafahana manao famandrihana ho an'ny Model 3: Apple Pay, fomba iray izay tsy misy afa-tsy amin'ny Safari amin'ny alàlan'ny Mac, iPhone na iPad.
MicroLED, ny efijery izay havoakan'i Apple miafina
Apple dia miasa mangingina amin'ny efijery manokana ho an'ny fitaovana ho avy. Ireo efijery ireo dia antsoina hoe MicroLED
Ny fangatahana asa nataon'i Steve Jobs dia mihantona amin'ny $ 174.000
Ny varotra varotra farany nosoniavin'i Steve Jobs dia nahatratra hatrany amin'ny ampahefatry ny iray tapitrisa dolara, ary ny fangatahana asa no vokatra tadiavina indrindra.
Ny kalandrie ho an'ny macOS, ary koa ny kalandrie iCloud, dia mamela anao hanome loko isan-karazany amin'ny kalandrie tsirairay, mba hahamora azy ireo hampiavaka azy.
Raha te hampifanaraka ny ekipanao amin'ny sary mihetsika vaovao aingam-panahy avy amin'ny WWDC 2018 ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay modely 16 isan-karazany.
WWDC 2018, ny karatra Fitbit Versa, GPU ao amin'ny Macs sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Toy ny isaky ny alahady, ao amin'ny Mac OS aho dia manolotra ny fanangonana vaovao be mpijery indrindra ao amin'ny bilaoginay. Ity herinandro ity…
Inona avy ireo Mac be mpampiasa indrindra amin'ny sehatry ny fanabeazana?
Ny manam-pahaizana Bradley Chambers dia mampiseho amintsika ny fomba fijeriny momba ny fahazoana Mac amin'ny tamba-jotra fanabeazana, mahafantatra ny fomba hisafidianana izay Mac no mety indrindra
Apple dia namoaka beta fahenina an'ny watchOS 4.3 ho an'ny mpamorona
Apple dia namoaka ny beta fahenina an'ny watchOS 4.3 ho an'ny Apple Watch. Ireo beta dia natao ho an'ny mpamorona ihany ary tsy misy kinova ampahibemaso
MacBook, iPad, ary Apple Pencil avo amin'ny lisitr'ireo honohono amin'ny March Keynote
Ary aorian'ny tsaho rehetra, ny tatitra sy ny fivoahana isan-karazany dia tsy maintsy lazainay fa ny hevi-dehibe voalohany an'ny ...
Na dia noraisintsika ho zava-poana aza izany rehetra izany, Apple dia nandefa olona an-jatony avy amin'ny media tamin'ny zoma ...
Te hahafantatra ireo rakitra DMG ve ianao? Ampidiro ary fantaro ny fomba fanokafana an'ity karazana rakitra macOS ity sy ireo rindranasa ilainao hampandehanana azy amin'ny rafitra miasa hafa toa ny Windows. Raha te hahalala ny mitovy amin'ny fanitarana ISO ao amin'ny Windows ianao ary amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hiarahanay miasa amin'izy ireo.
Amin'ny volana septambra, boky vaovao momba an'i Steve Jobs no havoaka, boky nosoratan'i Lisa, zanaka vavimatoan'i Steve Jobs ary toerana niresahany ny fifandraisany amin'ny rainy.
Apple dia nanambara hetsika iray ho an'ny volana martsa any Chicago, mifandraika amin'ny fanabeazana
Nisy nilaza ve ny keynote? Ary io dia toa toa tamin'ity volana ity isika dia lany ny hetsika Apple, mandeha ny sonia ...
HomeKit: omeo alàlana ny mpampiasa hafa hanana fidirana lavitra
Ity no fizarana faharoa aorian'ny fampianarana natombokay omaly miaraka amin'ny fomba fanamboarana ny tontonana fanaraha-maso an-trano ...
Amin'ireto processeur Intel Xeon sy Core manaraka ireto dia raikitra ny fahalemen'ny Spectre sy Meltdown
Intel CEO dia nanambara fa ny processeur Xeon sy ny processeur an'ny faha-8 dia voaro amin'ny Specter sy Meltdown.
Belzika sy Nederlandy no firenena manaraka izay hahatongavan'i Apple Pay
Ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy fifandraisan'i Apple, Apple Pay, dia hivelatra tsy ho ela amin'ny firenena roa vaovao: Netherlands and Belgique.
Ahoana ny fametrahana Kodi amin'ny Mac
Te hampiasa Kodi amin'ny Mac-nao ve ianao hilalao horonan-tsary, mozika na sary? Avelanay ianao miaraka amin'ny toro-lalana hametrahana azy amin'ny solosainao Apple
Ny tovolahy avy ao Cupertino dia nanokatra ny beta an'ny serivisy Apple Music for Artists mba hahafahan'ny vondrona sy mpihira vaovao manomboka mahita ny toerana sy ny fomba fitendrena ny mozik'izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia hasehontsika ny safidy hanamboarana ny afovoan'ny trano amin'ny Apple TV fahefatra ...
Ny fananganana Apple Watch Series 3 dia mitombo raha mihena kosa ny an'ny Series 0
Ny fanombohana ny Apple Watch Series 3 dia toa ny antony ilain'ny mpampiasa maro hanaiky ny smartwatch Apple.
Vaovao farany Apple Maps miaraka amin'ny mombamomba ny fifamoivoizana Orlando
Ny fampahalalana momba ny fitaterana Orlando dia hita ao amin'ny Apple Maps. Ny fampahalalana mandalo rehetra, ary koa ny làlana tsara indrindra, dia azon'ny mpampiasa Apple ampiasaina.
Ho an'i Apple, ny iMac Pro no "mpiara-miasa farany mamorona" ary manaporofo izany miaraka amina andian-dahatsary
Mba hampisehoana indray, ny herin'ny iMac Pro, Apple dia nanakarama mpamorona sy mpamorona sarimihetsika malaza maromaro hamorona sarimihetsika fohy 6 tohanan'ny iMac Pro fotsiny.
Ny macOS High Sierra 10.13.4 beta dia mametra ny fampiasana sary ivelany amin'ireo Mac farany teo
Ny Beta 5 an'ny macOS High Sierra 10.13.4, dia mametra ny fampiasana sary ivelany amin'ny Mac miaraka amin'ny Thunderbold 3. Tsy fantatra na manokana na azo antoka ny fandrefesana.
Podcast 9 × 25: Nanambara ny WWDC 2018 i Apple
Herinandro iray hafa dia nivory ny ekipan'ny Soy de Mac sy ny Actualidad iPhone mba hanoratra podcast vaovao momba ny vaovao farany avy amin'ny tontolon'ny Apple.
Ny kalandrie 2 dia nahazo vola crypto fitrandrahana 2.000 $ tao anatin'ny 3 andro monja
Ny rindranasa Kalandrie 2 izay nesorina tamin'ny Mac App Store noho ny fanjifana bateria be loatra, noho ny fitrandrahana cryptocurrency, dia niteraka $ 2.000 mahery tao anatin'ny telo andro nisy.
Ny tsy fahampian'ny fanavaozana an'i Apple dia hita taratra ao amin'ny Harris Reputation Quotient, fanadihadiana nataon'ny olom-pirenena amerikana mihoatra ny 28.000.
Adobe XD dia mamela anao hanafatra singa Photoshop sy Sketch
Adobe XD dia mamela anao hanafatra Photoshop sy Sketch fisie, hiara-miasa aminy mora foana. Nahazo fanavaozana ny Illustrator sy InDesing CC ihany koa izahay
WWDC 2018 dia nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy, manomboka amin'ny 4 Jona!
Ny vaovao voalohany momba ny fehezan-teny dia efa eto ary tsy momba ny keynote antenaina ...
Apple koa dia hanana andian-tsarimihetsika manokana ho an'ny serivisy streaming video
Ny zazalahy Cupertino dia nanidy fifanarahana handraketana ny andian-tsarimihetsika fanaon'izy ireo ho an'ny olon-dehibe, miaraka amin'ny fiteny sy atiny ho an'ny mpihaino rehetra.
Mamorona kopian'ny fakantsary APFS miaraka amin'ny Carbon Copy Cloner beta
Carbon Copy Cloner dia nanomboka tamin'ny beta 5.1 miaraka amin'ny fahafaha-manao kopia backup miorina amin'ny sary na sary namboarin'ilay rafitra.
Apple Music dia mahatratra mpanjifa 38 tapitrisa
Raha ny angom-baovao ofisialy farany avy amin'ny Apple, ny serivisy mozika streaming an'i Apple dia manana mpanjifa 38 tapitrisa mandoa, ary 8 tapitrisa kosa no mizaha izany amin'ny fotoana malalaka.
Apple Maps dia manampy fampahalalana momba ny bisikileta manofa any amin'ny tanàna 175 hafa
Hatramin'izao, New York, Paris ary Londres ihany no tanàna nahitan'i Apple izany fampahalalana izany ho an'ny ...
Ireo ny antsipirian'ny resadresaka nataon'i Eddy Cue nandritra ny fihaonambe SXSW
Eddy Cue dia nanao dinidinika tao amin'ny SXSW, mba hanambarana ny fandrosoan'ny atiny Apple tany am-boalohany, ary koa ny fanatsarana ny Apple TV Sports, noho ny fifaneraserana lehibe kokoa tamin'ny mpampiasa.
MacOS High Sierra 5 beta 10.13.4 dia eo am-pelatanan'ny mpamorona ankehitriny
Ary tamin'ity herinandro ity dia toa tsy tian'izy ireo avela handalo ny fotoana any Apple ary efa manana ...
Apple dia namoaka ny beta fahadimy amin'ny tvOS 11.3 ho an'ny mpamorona
Toy ny isaky ny alatsinainy dia mamoaka fanavaozana na betas vaovao i Apple izay ho rafitra fiasa manaraka amin'ny fitaovany….
Ahoana ny fanovana ny anaran'ny default amin'ny pikantsary amin'ny macOS
Ny anarana default izay omen'ny macOS amin'ny pikantsary dia tsy maharesy lahatra anao? Eto izahay no manazava ny fanovana azy amin'ny anarana mahaliana anao indrindra
Ny fehin-tànana KardiaBand ho an'ny Apple Watch dia mety hahitana potasioma marobe
Ny fehin-tànana KardiaBand ho an'ny Apple Watch dia hahamarika ny haavon'ny potasioma ao anaty rà ary amin'izany dia hisorohana ny aretim-po amin'ny coronary.
Transcend JetDrive 825 memory dia famenon-tsakafo tonga lafatra ho an'ireo Mac zokiny izay maniry ny hisolo ny SSD. Haingana noho ny SSD ny kit ary mamela ny kapila ankehitriny ampiasaina indray
Ny HomePod dia tsy mamarana ny fiaingany ho an'i Siri
Mbola tsy manana angon-drakitra mifandraika amin'ny varotra HomePod vaovao an'i Apple isika, saingy zavatra iray no mazava amin'ny ...
Beta vaovao, tolotra tsy azo atao amin'ny mpivarotra, Netflix ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Hofaranantsika amin'ny alàlan'ny vaovao marobe marobe eto amin'ny tontolon'ny Apple ity herinandro martsa ity ary izany no antony tianay hanangona ...
iCloud.com dia ampiasaina amin'ny antonony nefa manana fiasa tena lehibe
Raha ny fanadihadiana natao dia tsy mahafantatra ny tranonkala iCloud.com ny ankamaroany. Ho fanampin'izany, ampianarinay anao ny fomba hamerenana rakitra, fifandraisana na naoty voafafa tsy nahy tamin'ny iCloud.com
Fa mora toy izany ny mizara ny sarinao amin'ny tambajotra sosialy avy amin'ny Mac
Imbetsaka isika no manasarotra ny fiainantsika amin'ireo fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo hanatanterahana asa izay azo atao mivantana sy avy amin'ny ...
Ahoana ny fametrahana famerana ny ray aman-dreny amin'ny Mac
Ny fanampiana ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny amin'ny Mac dia zava-dehibe amin'ny tranga fananana zanaka ao an-trano sy ...
Mitombo hatrany ny varotra AirPods, raha diso fanantenana kosa ny HomePods
Ny mpandalina Barclays dia namoaka ny fandinihana natao niaraka tamin'ireo mpanamboatra ny vokatra Apple. Fantatsika amin'izany fa diso fanantenana ny varotra HomePod ary mitombo ny fivarotana AirPods.
Ahoana ny fomba hividianana toerana bebe kokoa amin'ny iCloud amin'ny Mac
Mila toerana bebe kokoa amin'ny iCloud ve ianao ary tsy mahay mampitombo ny drafitrao? Azavainay, tsikelikely, ny fomba fanaovana azy amin'ny Mac
Manolotra safidy tsara hafa ho an'ny monitor LG 5k izay nohanin'i Liyama izahay
Ny safidy tsara indrindra amin'ny monitor LG Ultrafine 5k dia ny maodely Liyama. Mizara kalitao sy sakan'ny efijery izy ireo, na izany aza tsy manana fampidirana Thunderbold ity modely ity.
9 × 24 Podcast: Password Managers VS iCloud Keychain
Nandritra ny podcast omaly alina dia niresaka tamin'ny mpiara-miasa amin'i Actualidad iPhone sy Actualidad Gadget momba ny lohahevitra maro izahay ...
Ilay mpihira Axl Rose dia nilaza fa i Tim Cook no Donald Trump an'ny indostrian'ny mozika
Ilay mpihira Axel Rose dia nandefa bitsika milaza fa Tim Cook no Donald Trump an'ny indostrian'ny mozika
Mihevitra ve ianao fa mampiasa Netflix bebe kokoa amin'ny Mac? Diso ianao
Mihevitra ve ianao fa mampiasa Netflix bebe kokoa amin'ny Mac na amin'ny iPhone / iPad? Diso ianao ary asehon'ny Netflix anao amin'ny sary fampiasana
Apple dia mamoaka ny tatitra isan-taona momba ny mpamatsy azy
Toy ny mahazatra, ny orinasa Cupertino dia manohy manohy ny fanaraha-maso ireo mpamatsy hanamarinana izany fitoviana sy ...
Ahoana ny fomba hahitana ireo rindranasa 32-bit napetraka ao amin'ny Mac
Ny fahafantarana raha toa ka mifanaraka amin'ny 64 bit ireo rindranasa napetrakao amin'ny Mac dia ahafahantsika manomana raha toa ka tsy maintsy manova ny rindranasa amin'ny kinova macOS manaraka izahay, kinova izay tsy hifanaraka amin'ireo rindranasa 32-bit.
Ny atin'ny antso vonjy taitra dia voasivana noho ny lozam-pifamoivoizana nitranga teo amin'ny varavarankely Apple Park
Ny famolavolana ny Apple Park vaovao dia tsara tarehy tokoa ka ny rindriny dia manome mihoatra noho ny aretin'andoha ...
Apple namoaka Safari Technology Preview 51
Roa herinandro, tsy ho diso ireo kinova ireo ary efa ananantsika eto amintsika ny kinova manaraka an'ny fizahan-tany fanandramana Apple ho ...
Apple dia hanolotra Apple Music 6 volana maimaim-poana amin'ny maodely Fiat sy Volkswagen sasany
Raha mieritreritra ny hividy fiara vaovao ianao. Ary ity dia FIAT na Volkswagen, ho gaga ianao satria hanome anao 6 volana amin'ny serivisy Apple Music izy ireo
Magical Bridge, dia fototra iray vao nahazo $ 250.000 avy amin'i Apple
Matetika Apple dia manome fanomezana indraindray ary amin'ity tranga ity ny Magical Bridge Foundation, vao nahazo ...
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanomboka nandefa mailaka tamin'ny mpiara-miasa aminy dia nanambara fa hitsahatra tsy handray rakikira misy atiny fanampiny, antsoina hoe iTunes LP
Apple dia manohy manitatra ny isan'ny banky sy ny andrim-panjakana manohana ny Apple Pay, ary manao izany any Etazonia ihany.
Azo antoka fa efa fantatsika rehetra ny mety hamoha ny MacBook amin'ny alàlan'ny Apple Watch, fa tsy ny Mac rehetra ...
Ny hadalan'ny Apple Premium Reseller dia nirodana ivontoerana fiantsenana
Ny fientanam-po amin'ny vokatra Apple dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika ary ny mpivarotra Apple Premium, ...
Manodidina ny 10.000 miliara dolara ny sandan'ny Apple Music
Miaraka amin'ireo mpamandrika maherin'ny 36 tapitrisa mandoa, hoy ny mpandalina Toni Sacconaghi, Apple Music dia mitentina $ 10.000 miliara dolara ankehitriny.
Ny mpandahateny vaovao an'ny Apple, ny HomePod, dia asongadinà amin'ny doka vaovao natombok'i Apple ary notarihin'i Spike ...
Asehonay ny rindranasa izay mbola ao anatin'ny vanim-potoana fitsapana MyAppNap, ahafahanao mitahiry ny bateria Mac amin'ny alàlan'ny fampandehanana ireo rindrambaiko ao ambadika
Apple dia manolo-tena mafy amin'ny tontolon'ny feo sy mozika
Tato ho ato dia mahita vaovao tsy misy farany mifandraika amin'i Apple sy izay rehetra misy ifandraisany amin'ny ...
Raiso fampandrenesana avy amin'ny Spotify amin'ny macOS misaotra an'i Notify
Afaka mahazo fampandrenesana avy amin'ny Spotify izahay noho ny fampiharana notontosain'ny Notify. Ankoatra ny mpanakanto, ny lohateny ary ny rakipeo, afaka mahita an'i El Progreso isika ary mamaky ilay lalana.
Ny tsaho farany indrindra dia ny Apple miasa ao am-peo am-peo farany manafoana tabataba
Araka ny voalazan'i Mark Gurman, Apple dia miasa amin'ny fakan-tsarimihetsika avo lenta, fanakanana feo ary tsy misy tariby.
Ahoana ny fomba hampihenana ny haben'ny iCloud Photo Library amin'ny Mac
Azo antoka fa mihoatra ny iray aminareo no nahita ilay hafatra hoe tsy manana toerana ao amin'ny iCloud ianao hamonjy ...
Mitadiava rakitra misy dika mitovy ao amin'ny iTunes 12
Ny fiasa hanehoana zavatra dika mitovy dia efa tao amin'ny iTunes nandritra ny kinova maromaro, saingy ao amin'ny iTunes 12 dia miafina kokoa izy io. Fantaro ny fomba hahitana azy.
Fomba 4 hisafidianana rakitra amin'ny Mac
Ny fisafidianana rakitra ao anaty macOS dia dingana iray tena tsotra, dingana iray azontsika atao amin'ny fomba samihafa arakaraka ny filantsika.
Apple Watch Series 3, AirPod vaovao, famandrihana HomePod, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Efa amin'ny volana martsa isika ary mandeha ny fotoana. Tamin'ny faran'ny volana febroary sy ny fiandohan'ny volana martsa dia nahita ...
Ny Apple Watch dia hanolotra fanamby vaovao amintsika amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy
Apple dia manolotra fanamby hetsika vaovao mifandraika amin'ny Apple Watch, manararaotra ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy ataontsika roa heny ny fampiharana izay misy famenoana peratra.
Apple dia mameno sticker amin'ny rindrina Apple Park hisorohana lozam-pifamoivoizana bebe kokoa
Rehefa avy nametaka ny varavarankelin'ny biraon'ny Apple Park ianao dia toa nanjavona ireo tranga nifandona tamin'ireo varavarankely.
Apple dia miomana amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy amin'ny 8 martsa
Toy ny isan-taona, tonga ny 8 martsa, Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary manerana ...
Ny angona IDC dia manamafy ny varotra tsara an'ny Apple Watch mandritra ny 2017
Betsaka ny orinasa namoaka ny angon-drakitra momba ny tsenan'ny smartwatch ary mifanindry daholo izy rehetra ...
Amboary ny rakitra amin'ny macOS miaraka amina fiasa miafina "Save As"
Atambaro ny fisie eo anelanelan'ny lahatahiry, safidio ny safidy mety indrindra ilaintsika. Hainay ny fiasa miafina "Save As"
Ahoana ny fanovana ny kisary default amin'ny fisie na lahatahiry ho sary
Ny fanovana ny kisary izay maneho ny lahatahiry na rakitra izay ampiasaintsika matetika amin'ny sary dia dingana tsotra izay tsy mila fahalalana firy.
Ahoana ny fomba hanehoana ny hetsika "Kalandrie" rehetra amin'ny lisitra tokana
Te hahita ny zava-mitranga rehetra ao amin'ny kalandrie ao anaty lisitra ve ianao? Miaraka amin'ny fampiharana Mac Calendar azonao atao mora foana izany
Hitanay ny fomba macOS 11 dia avy amin'ny tanan'ny mpamorona iray, ny fampiharana teratany dia mifangaro ao amin'ny birao, vaovao avy amin'ny Center Control ary maody maizina tsara kokoa amin'ireo novelista hafa.
Tian'i Apple ho patanty ny marika Park sy ny faribolana
Ny zavatra iray dia mazava ary ny Apple dia mahafantatra ny fomba hahitana dikany izay ...
Fitbit dia te-hiatrika ny Apple Watch indray
Impiry isika no niresaka momba ny isan'ny olona te-hijoro amin'ny Apple Watch, saingy tsy misy amin'izy ireo mahazo ...
Podcast 9 × 23: Miloka amin'ny headphone i Apple
Herinandro hafa no nihaonantsika tamin'ny ekipa iPhone News ary avy any Mac aho hiresaka ny vaovao rehetra tamin'ny herinandro lasa izay mifandraika amin'i Apple.
Tandremo ny mailaka toa an'i Apple fa tsy izany. Apple dia manisy fizarana momba azy io amin'ny tranonkala
Ity dia zavatra efa mahazatra eo amin'ireo mpampiasa ny vokatra Apple sy amin'ny ankapobeny ho an'ireo ...
Ahoana ny fomba hamafana ireo entana ao anaty fako aorian'ny 30 andro
Fampiasana misy ao amin'ny Finder mandritra ny fotoana ela io ary mety tena ilaina amin'ireo mpampiasa ireo ...
Ny Lane Guided Driving amin'ny Apple Maps dia misy any Austria, Afrika Atsimo ary Suisse izao
Ny fampahalalana notarihina tamin'ny alàlan'ny Apple Maps dia nanjary azo tamina firenena telo vaovao: Afrika Atsimo, Suisse ary Austria.
Adika ny lisitry ny fisie rehetra ao anaty lahatahiry ho TextEdit afaka segondra
Ao amin'ny macOS dia azontsika atao ny maka tahaka ny lisitr'ireo rakitra rehetra ao anaty lahatahiry ao amin'ny TextEdit ao anatin'ny segondra, manamboatra araka ny tokony ho izy ny TextEdit ary mandika sy mametaka.
South Carolina dia manitatra isan'ny tanàna tohanan'ny Apple Maps Transit information
Apple dia nanitatra ny isan'ireo tanàna izay manohana ny mombamomba ny fitateram-bahoaka any Etazonia amin'ny telo.
Night Shyamalan, hamokarana andian-tantara 10 ho an'i Apple
Ny talen'ny fanta-daza Night Shyamalan dia nanao fifanarahana tamin'i Apple mba hamokatra vanim-potoana voalohany amin'ny andian-tantara miafina izay hahitana fizarana 10 ao anatin'ny 30 minitra, araka ny filazan'ny Variety.
Ity dia iray amin'ireo fiasa mahaliana natolotry ny rafitra fiasan'ny macOS hanana fidirana haingana amin'ny safidy ...
Ity dia zavatra tsy vaovao ary ny tena azo inoana dia efa fantatrao ny fanovana ny loko na ...
Ny fanampiana farany an'i Apple dia hita ao amin'i Michael Abbott, filoha lefitra ambony amin'ny injeniera ao amin'ny Twitter ary efa niasa tao amin'ny Microsoft sy Palm teo aloha mandra-pahatongan'ny HP novidiny.
Raha ny filazan'ny orinasan-fikarohana NPD, ny fanombohana ny HomePod dia nahitana fahombiazana voalohany lehibe noho izay hita tamin'ny nanombohana ny Sonos One sy ny HomePod.
Tianao ve ny fisie ny Finder lahatahiry dia eo an-tampony foana? Araho ireto dingana tsotra ireto dia azonao atao ny manafatra azy ireo araka ny itiavanao azy
Hanatrika ny Forum Development ho tanterahina amin'ny volana martsa any China i Tim Cook, ho filoha mpiara-miasa. Mpitantana vaovaon'ny orinasa iraisam-pirenena maro no hanatrika ity hetsika ity.
Voamarina fa mampiasa mpizara Google ho an'ny angona iCloud i Apple
Raha jerena ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia mety nanontany tena ianao hoe inona no ifandraisan'ny iCloud amin'ny Google Cloud. Manzana…
CBS Sports HQ no fantsona farany azo ampiana amin'ny sehatry ny Fanatanjahantena ao amin'ny Apple TV
CBS Sports HQ dia tonga amin'ny sehatry ny Sports amin'ny Apple TV, ny tambajotra dia hanolotra fanatanjahan-tena 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro
Apple dia tsy afaka nihazona ny toerany teo alohan'ny governemanta sinoa ary noterena hamindra ny tenimiafin'ny mpampiasa sinoa ho any Chine izy, ary mametraka izany eo am-pelatanan'ny governemanta sinoa na oviana na oviana.
Apple dia afaka manolotra headphones avo lenta vaovao amin'ny faran'ny taona 2018. Azo antoka fa ho headphone headband izy ireo ary hampiditra an'i Siri amin'ny fomba tsy ampoizina.
Mac clipboard tsy mandeha tsara ho anao? Avelanay eto ianao fomba maro hahafahanao mamerina azy io tsy mila miverina mamerina amin'ny laoniny manontolo ny Mac
Huawei dia mandefa mpifaninana amin'ny MacBook an'ny Apple, Huawei MateBook X Pro
Ary ny MWC dia manana fahaiza-manao feno mandritra ireo ora ireo ary vao omaly ny sasany amin'ireo ...
Apple hanala ny fanohanan'ny iTunes Store ho an'ny Apple TV amin'ny volana Mey
Hitsahatra tsy hanohana ny iTunes Store i Apple TV ho an'ny Apple TV andiany voalohany hatramin'ny 25 Mey. Ho setrin'izany, Windows XP sy Vista dia manatevin-daharana ny fepetra.
Fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch, beta vaovao an'ny macOS High Sierra 10.13.4, vaovaon'ny AirPlay 2, angona ao amin'ny ambaratonga ambony iCloud Drive ary bebe kokoa amin'ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny Mac avy any Mac aho
Indray Alahady indray dia eto izahay hizara ny fanangonana vaovao be mpijery indrindra ao amin'ny bilaoginay tamin'ny herinandro lasa….
Miseho amin'ny "Find My iPhone" ny Mac na dia avereno aza ny solosainako
Ho an'ireo mpampiasa vaovao, azo atao ny mitady fitaovana Apple raha voasoratra ao amin'ny kaonty iCloud anao, ...
Apple dia manakarama fitantanana fahitalavitra Gaumont ho lohan'ny famokarana
Apple dia manakarama mpitantana iray manana traikefa amin'ny andiam-pahitalavitra malaza, hanara-maso ny atin'ny tambajotram-pahitalavitra Apple
Ahoana ny fomba handaminana ny Dock mba hanafenana haingana kokoa
Raha mandroso ny faharetan'ny asan'ny Dock rehefa miafina izy, amin'ny alalàn'ity baiko ity dia azontsika atao ny manafaingana ny fisehoany.
Apple dia mamoaka horonantsary vaovao hampianarana anao ny fomba fananganana HomePod
Apple dia nandefa horonantsary vaovao tao amin'ny fantsona YouTube azy. Ity iray ity dia manondro ny fananganana voalohany ny mpandahateny mahay HomePod
Sombim-pahatsiarovana Steve Jobs telo vaovao no halefa lavanty
Raha te hanana vokatra nosoniavin'i Steve Jobs ianao, afaka andro vitsivitsy dia hisy 3 ny lavanty amin'ireo zavatra nosoniavin'i Steve Jobs
Mamorona Podcast amin'ny Anchor ary ampidiro ao amin'ny Apple Podcast
Nahatratra ny kinova 3.0 ny Vatofantsika ary lasa, fangatahan'ny mpampiasa, fangatahana famoronana, fanovana ary fampidinana Podcast.
Apple Pay dia manana mpampiasa 127 tapitrisa ary mifanaraka amin'ny banky 2.700 XNUMX mahery
roa taona sy tapany taorian'ny nanombohan'ny Apple Pay, hoy ny orinasan'ny Loup Ventures, ny rafitra fandoavam-bola elektronika Apple Pay dia manana mpampiasa 127 tapitrisa ary mifanaraka amin'ireo banky sy andrim-panjakana maherin'ny 2.700 manerana an'izao tontolo izao.
Ireo ny sary ofisialin'ny Apple Store voalohany any Aostralia
Ary ny orinasa ve tsy mijanona amin'ny fanokafana fivarotana vaovao manerantany ary toy ny mahazatra ...
Ahoana ny fomba hanafenana azy ireo amin'ny Dock amin'ny Mac
Afeno na asehoy ho azy ny Dock Applications ao amin'ny Mac dia dingana iray tena tsotra, dingana izay hojerentsika etsy ambany.
Ahoana ny fomba hamoronana valiny mandeha ho azy ao amin'ny Mail ho an'ny macOS
Ianao ve mila manangana valiny mandeha ho azy ao anaty boaty mailakao? Mampiasa macOS Mail ve ianao? Eto izahay dia milaza aminao tsikelikely ny fomba fanaovana azy
Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny Dashboard amin'ny macOS High Sierra
Ny Dashboard dia mamela antsika hiditra amin'ny rindranasa samihafa amin'ny endrika widget raha tsy mila miditra amin'ilay application na manokatra azy mivantana.
Parallels Toolbox 2.5 dia misy fampiasa vaovao
Nampahafantatra Parallels Toolbox 2.5, miaraka amin'ny fanatsarana ny fiasa sy ny fanampiana endri-javatra vaovao, toy ny pikantsary sy fitantanana RAM.
Mitohy ny fanitarana ny banky sy ny andrim-panjakana mifanaraka amin'ny Apple Pay
Ny isan'ny banky sy ny andrim-panjakana mifandraika amin'ny Apple Pay dia mitombo hatrany, farafaharatsiny any Etazonia, izay nitombo 25 ny isan'izy ireo.
AirPlay 2 manjavona amin'ireo betas farany natombok'i Apple
Ny iray amin'ireo lahasa andrasan'ny mpampiasa indrindra, ny AirPlay 2, dia nanjavona tampoka tao amin'ireo betas farany natombok'i Apple
Apple dia namoaka ny kinova 50 an'ny Safari Technology Preview browser
Fanavaozana vaovao ny fizahana fanandramana Safari Technology Preview, izay mahatratra ny kinova 50, isa boribory ho an'ny mpitety ...
AirPods, HomePod ary iPhone X dia mahatonga an'i Apple ho orinasa manavao indrindra eran'izao tontolo izao
Ary izany dia ny tsy ahafahanao miditra amin'ny fotoana mamy kokoa amin'ny orinasa iray noho ny fivarotana ...
Podcast 9 × 22: mirehareha amin'ny "Notch" i Android
Tamin'ity tranga ity dia nampahatsiahy antsika i Luis momba ireo fizarana maherin'ny 100 izay efa noraisinay mivantana tamin'ny fantsona YouTube ...
Apple dia nifanandrina tamin'ny antoko Green Green Australiana noho ny toeran'ny Apple Store vaovao
Ny fanapahan-kevitry ny governemanta Aostraliana hanome alalana an'i Apple hanangana Apple Store vaovao ao amin'ny Kianja Federaly ao Merlbourne dia nanohitra ny antoko Green
Spotify dia miasa amin'ny mpandahateny iray hifaninana amin'ny HomePod
Ny tsaho momba ny mety fanombohan'ny mpitory azy manokana avy amin'i Spotify dia nitombo indray taorian'ny fahitany ny tolotra asa farany nataon'ny orinasa soedoà.
Afaka mamaky kapila amin'ny endrika APFS ianao izao noho ny fampiharana Kit Retrofit maimaim-poana
Avy amin'ny tovolahy ao Paragon dia misy ny Kit Retrofit, miaraka amin'ny fahaizana mamaky ny APFS avy amin'ny kapila HFS +. Ho an'ny kinova manaraka dia antenaina fa afaka manova ireo fisie ireo.
Hisy varotra $ 2000 nosoniavin'i Steve Jobs ho an'ny lavanty
Ny vokatra miakatra amin'ny lavanty ary mifandraika amin'ny angano Steve Jobs dia hita tao amin'ny seky nomeny ny sakaizany tamin'io fotoana io $ 2.000
Inona no azontsika atao raha manana lakile iray na maromaro izay tsy mamaly ny fitendry antsika?
Ao amin'ny kitendry vaovao dia mora kokoa ny mahafantatra raha tena ilaina ny mikasika izany, ka ...
Apple dia namoaka ny beta fahatelo ho an'ny mpamorona macOS High 10.13.4
Apple dia namoaka ny kinova beta fahatelo momba ny fanavaozana macOS High Sierra 10.13.4 manaraka. Ao…
Apple dia mitady fampiasana vaovao ho an'ny sary famantarana avana Apple
Apple dia nandefa ny volana jona lasa teo tany Jamaika ary taty aoriana dia tany Etazonia no nangataka fangatahana hisoratra anarana ny avana an'ny orinasa Cupertino.
Inona ny Network Utility amin'ny macOS?
Ho an'ireo rehetra izay tsy mahalala akory hoe aiza no misy ity fampiasana ity ao amin'ny rafitra fiasanay macOS, holazainay aminao ...
Twitterrific dia manohy manararaotra ny fisintoman'ny rindranasa ofisialy ary havaozina vaovao vaovao
Ny mpanjifa Twitter ho an'ny Mac, Twitterrific dia navaozina vao nanampy fiasa vaovao sy fanatsarana ireo efa nananany.
Ny fianjerana APFS dia mety hiteraka fatiantoka data ao amin'ny macOS High Sierra rehefa manoratra amin'ny sary kapila
Mike Bombich, mpamorona ny Carbon Copy Cloner, dia naneho hevitra tao amin'ny bilaoginy momba ny lesoka hita rehefa nanoratra tamina sary kapila izy, raha ny format an'ny kapila dia APFS.
Nanomboka vaky ny varavarankely sasany ao amin'ny Apple Store vaovao any Chicago
Ny Apple Store dia miatrika ny olana famolavolana lehibe fahatelo miaraka amin'ny fisehoan'ny triatra, izay mihalehibe hatrany, ao amin'ny iray amin'ireo varavarankelin'ny fivarotana.
Efa misy drôna maromaro mihantona eo an-tampon'ny Apple Park
Izany dia zavatra hita ho avy ary izany dia ny Apple Park dia tanjona mazava ho an'ny mpanamory fiaramanidina maro ...
Nanambara i HP fa hanomboka hivarotra Mac izy ankoatry ny vokatra Apple hafa
Ny orinasa amerikana Hewlett Packard dia nanambara fa hanomboka hanolotra ny mpanjifany Macs, iPhone, iPad ary Apple Watch izy ireo.
Vonoy na ovao ny bitsika "Miaina" ao amin'ny Apple Watch anao
Ny Apple Watch dia napetraka ho iray amin'ireo vokatra tsara tato ho ato tao amin'ny Apple ary izany dia satria ...
Vao tsy ela akory izay dia nanova ny adiresin'ny orinasa i Apple ary nodimandry ny One Infinite Loop ary nanome lalana ny One Apple Park
Ny fanadiovana ireo lahatahiry rakitra izay matetika ampiasaintsika vonjimaika dia asa tena tsotra noho ny fampiharana NuClear Folder, fampiharana maimaimpoana.
Ilaina ny fahalalana ny fampahalalana sy ny fiasan'ny batterie, indrindra raha nanomboka naneho ireo famantarana ny havizanana izy.
Twitterrific dia mampihena ny vidiny mihoatra ny 50% taorian'ny nanambaran'ny Twitter ny fisotroan-dronono ny fampiharana azy
Ny lehilahy ao amin'ny The Iconfactory dia nanapaka ny vidin'ny mpanjifany Twitter ho an'ny Mac, Twitterrific, mihoatra ny antsasany, taorian'ny fanambarana ny faran'ny fanohanana ny fampiharana Twitter ofisialy ho an'ny Mac
HomePod, varotra TrendForce Mac, Apple Park vita ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro mangina ho an'ny Apple sy ho an'ireo mpamorona marika tsy mbola nanana kinova beta. Amin'ny fitsipika aorian'ny ...
Ahoana ny fomba hampihenana ny lanjan'ny rakitra PDF amin'ny Mac
Te hampihena ny haben'ny rakitra PDF amin'ny macOS ve ianao? Mora aminao ny fampiharana Preview izay mahazatra amin'ny macOS
Ahoana ny fampiasana ny Boot Manager amin'ny macOS
Hanombohana azy dia holazainay fa raha manana kapila boot hafa miaraka amin'ny rafitra fiasa mifandraika amin'ny Mac ianao dia ...
Ireo varavarankely goavambe ao amin'ny Apple Park no nahatonga ny lozam-pifamoivoizana voalohany tao anaty vala
Raha misy zavatra misongadina ao amin'ny Apple Park ankoatry ny fahalehibiazan'ilay trano, ny sahan'ny hazo ...
Nanamafy ny Twitter fa mamela ny fanohanana ny fampiharana azy ao amin'ny macOS izy
Ny kaonty mpanohana Twitter dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa tsy hanolotra fanohanana ny fampiharana Mac intsony izy ireo.
Ny WWDC amin'ity taona ity dia mandeha amin'ny 4-8 Jona ao amin'ny San José McEnery Convention Center
Azo antoka fa mbola lavitra ny lalana ho an'ity hetsika ity izay mifantoka amin'ireo mpamorona ary aiza no andrasan'ny ankamaroantsika ...
Mamorona sarintany misy ny kapila mafy ataonao amin'ny Disk Graph
Raha ny fahazoana ny kisarisary amin'ny fizarana ireo rakitra amin'ny kapila mangirana, ny rindranasa Disk Graph dia manome vahaolana haingana sy mora amintsika.
Hihaona amin'ny GitFinder, mpanjifa Git iray izay mifangaro ao anaty Finder
GitFinder dia mpitantana Git izay mamela antsika hahazo vokatra amin'ny alàlan'ny fampidirina ao amin'ny Finder. Very ny asanay fa miasa miaraka amina programa tokana isika ho an'ny fiasa roa.
Ahoana ny fomba hanafenana haingana na hanehoana rakitra amin'ny macOS miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry
Raha te hanafina sy mampiseho haingana ireo rakitrao miafina ianao, ny fomba haingana indrindra dia amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry fa tsy amin'ny alàlan'ny menus.
Taorian'ny fahombiazan'ny vanim-potoana voalohany dia toa miloka be amin'ny atiny manokana i Apple amin'ity taona 2018 ...
Hainay ny 2big Dock, foibe fitehirizana sy docking RAID, miaraka amina fifandraisana sy slot Thunderbolt 3 ho an'ny karatra mpaka sary.
Rehefa toa manondro ny zava-drehetra fa lavitra be ny Apple Glasses ka tsy tonga eny an-tsena, dia namoaka fandikana isan-karazany ireo tovolahy ao amin'ny iDropNews izay manolotra izay ao an-tsain'ny mpamorona.
Raha hanova ny Apple ID amin'ny HomePod dia tsy maintsy hamerina azy ianao
Tutorial momba ny fanovana ny Apple ID amin'ny HomePod. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy averina apetraka amin'ny Apple ilay mpandahateny na avy amin'ny HomePod ihany.
Podcast 9 × 21: HomePod eny, HomePod no
Ao amin'ny programa laharana faha-21 amin'ny vanim-potoana fahasivy an'ny iPhone ary avy amin'ny Mac podcast aho dia niresaka lava momba ny HomePod, ny tombony, ny fatiantoka ary ny olana ...
Ahoana ny fomba hanampiana tenimiafina mikirao praogramanao amin'ny Mac Fampiasana tokana
Vao ny talata lasa teo dia hitantsika ny fomba ahafahantsika manampy teny miafina amin'ny Mac hisorohana ny fanombohana ...
Niakatra ny vidin'ny serivisy YouTube TV taorian'ny nanampiany fantsom-baovao
Ny sehatry ny fantsona Internet an'ny Google, YouTube TV, dia nanambara ny fiakaran'ny vidin'ny sarany isam-bolana ankoatry ny fanambarana ny fonosana fantsona vaovao.
Apple dia manomboka mivarotra modely Apple Watch Series 3 nohavaozina
Taorian'ny fanavaozana tao amin'ny Apple Store refurbished Products Store (natokana ho an'i Etazonia), ny orinasa miorina ...
HomePod dia afaka mamela marika eo amin'ny vatan-kazo vita vita verinia
Ny mpampiasa sasany dia mahatsikaritra marika avy amin'ny HomePod rehefa mipetaka amin'ny hazo varnished izy. Fantatr'i Apple fa ny silicone eo ambanin'ny mpandahateny dia afaka mamela marika rehefa mihetsika amin'ny hazo. Mandeha irery ny ankamaroan'izy ireo.
Google mandefa ny Chrome 65 miaraka amin'ny mpanakana doka anatiny
Google dia nanangana Chrome 65, tranokala voalohany eny an-tsena miaraka amina blocker doka izay hanampy sy hanatsara ny traikefa fitetezana ho an'ny mpampiasa amin'ny fanesorana ireo doka mampiditra sy sarotra.
Vidio ny HomePod any amin'ny firenena hafa?
Hividy na tsia hividy vokatra Apple amin'ny firenena hafa ankoatry ny anao? Ny mazava dia ...
Ampandehano ny hidin-trano amin'ny Mac raha sendra misy fatiantoka na fangalarana
Mety ho hafahafa izany, saingy ny tolo-kevitra voalohany tokony hataon'i Apple na ny manam-pahefana (izay mahalala ...
Ny fanadihadiana iray dia manamafy fa ny HomePod dia mizara tsara ny feo manerana ny efitrano
Ny algorithm nampiasain'i Apple hizara feo mitovy, raha ny fanadihadiana natao, fandrefesana ny feo amin'ny teboka efatra ao amin'ny efitrano ary hita fa mitovy izany.
Nanizingizina i Apple fa tsy mila drôna ho an'ny toerana ilaina ao aminy
Apple dia mijanona eo amin'ny toerany hatrany mba hiezaka hisoroka ny drôna tsy hisidina ambonin'ireo toeram-ponenany, na dia nahazo alalana ofisialy aza izy mba hanilihana ny toerana misy azy amin'ny sidina toy izany.
Tale jeneralin'ny Flipboard: "Apple News dia miorim-paka tamin'ny lasa"
Ny CEO sy ny mpanorina an'i Flipboard dia manafika miharihary amin'ny Apple News - rafitra iray izay niorim-paka tamin'ny lasa izy io.
Araka ny Consumer Reports, ny Sonos One sy ny Google Home Max dia toa tsara noho ny HomePod
Consumer Reports dia namoaka ny tatitra momba ny HomePod, tatitra iray izay mitana ny laharana ambany noho ny Google Home Max sy ny Sonos One.
Cook dia nanambara fa ny fizarazarana azo ampiasaina dia orinasa Fortune300 irery
Tamin'ny fivoriana natao omaly ho an'ireo tompon-trano lehibe amin'ny marika, ny CEO CEO Apple Tim ...
Vaovao tsara be ho an'ireo mpampiasa an'ireo orinasam-pandraharahana roa Caja Rural sy Evo Banca Inteligente….
Mampahafantatra ny zava-baovao ao amin'ny Lightroom CC, Lightroom Classic, ary Adobe XD CC, ao amin'ny bilaogy Adobe. Mifantoka amin'ny fanatsarana ny hafainganana sy ny fahombiazany izy ireo.
Skype dia manana bibikely fiarovana nefa tsy mikasa ny hanamboatra azy io atsy ho atsy i Microsoft
Ny sehatra fandefasan-kafatra sy antso an-dahatsary dia manana hadisoam-piarovana izay tsy kasain'i Microsoft hovahana mandritra ny fotoana fohy, farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny mpandika ny HomePod dia nanisy atitany tena notsorina
Ny HomePod izay manome be dia be horesahina dia tsy tsiambaratelo na iza na iza ary hatramin'ny nametrahan'i Apple ...
Androany amin'ny 9 ora maraina Pasifika, ny orinasa Cupertino dia hanao fivoriana fanao isan-taona amin'ireo tompon-tany ary ity ...
Ny tanànan'i Tucson no farany nanatevin-daharana ny klioban'ny tanàna voafantina izay manome vaovao momba ny fitateram-bahoaka amin'ny Apple Maps
Ahoana ny fomba hanampiana tenimiafina firmware amin'ny Mac
Ny zavatra voalohany tsy maintsy fantatsika dia ny dikan'ny hoe manampy teny miafina ho an'ny Mac. Ity dia zavatra ...
Apple dia nanitatra ny fampiroboroboana Apple Music ho an'ny mpianatra amin'ny 82 tanàna vaovao
Apple dia manohy manitatra ny tolotra omeny any amin'ny firenena sisa misy azy amin'ny alàlan'ny vokatra sy ...
Apple Park fananganana efa ho vita
Ao amin'ny horonantsary drone farany an'ny Apple Park, afaka jerentsika ny fomba nahavitan'ny asa, ka ireo crano mbola mijanona angamba dia hanjavona amin'ity volana ity.
Ahoana ny fomba hangatahana amin'i Siri hilalao Podcast amin'ny HomePod
Fampianarana momba ireo hafatra azontsika lazaina amin'i Siri amin'ny HomePod izay Podcast tiantsika hohenoina sy hilalao, handroso ary hiato ny Podcast anay.
Ny HomePod dia manana fifandraisana miafina 14-pin ary fitehirizana 16GB, araka ny filazan'ny iFixit
Ireo tovolahy ao amin'ny iFixit dia efa nanomboka nanala ny HomePod, fitaovana iray izay saika tsy azo amboarina intsony satria tsy misy fomba famongorana azy raha tsy manapotika azy.
Maninona aho no tsy afaka mamoha ireo fikirana ao amin'ny Preferansa System?
Ny iray amin'ireo fanontaniana apetraky ny mpampiasa Mac antsika indraindray dia ny iray ao aminao ...
Tombony sy fatiantoka amin'ny fampiasana ny HomePod ho mpandahateny Apple TV
Na dia tsy manambara izany aza i Apple dia azo atao ny mampifandray HomePod amin'ny Apple TV mba hamoahana ilay feo amin'ny alàlan'ny mpandahateny Apple.
Mifantoha amin'ireo tena manan-danja amin'ny NuClear Desktop
Noho ny rindranasa NuClear Desktop dia azontsika atao ny manafina ireo rindranasa rehetra izay tsy ilaintsika vonjimaika mba hahafahanay mifantoka amin'ny asanay fotsiny.
Apple dia afaka mandefa HomePod mora kokoa amin'ity taona ity, hoy ny mpandalina
Raha ny filazan'ny mpandinika dia afaka manombatombana ny mety hanombohana HomePod amin'ny vidiny mora kokoa i Apple amin'ity taona 2018 ity
Afaka esorina ny tadin'ny herin'ny HomePod, fa tsy tokony
Azo soloina ny tariby herinaratra HomePod, saingy tsy mora ny dingana hanovana azy, satria noho ny tsindry mitohy izay tsy maintsy ataontsika dia mety hiteraka fahatapahana izany.
Namaly fahafaham-po i Siri tamin'ny 52.3% amin'ireo fangatahana natao tamin'ny fitsapana HomePod
Raha ny fitsapana fitsikilovana virtoaly farany nataon'ny orinasa Loup Ventures, ny Apple's HomePod dia ...
Araho ny tsingerin'ny volana miaraka amin'ity widget ity ho an'ny macOS
Fantatray ity rindranasa ity izay mampiseho antsika tsirairay amin'ireo dingana isam-bolana amin'ny fampiharana minimalista izay hita eo amin'ny biraon'ny asa.
Sonos dia mandray ny HomePod miaraka amin'ny lisitry ny lisitry ny Spotify
Ilay mpanamboatra Sonos dia nampiasa lisitry ny playlist tao Spotify handefasana hafatra tongasoa any amin'ny HomePod an'ny Apple.
Mianara bebe kokoa momba ny HomePod miaraka amin'ny lesona video Apple
Apple dia nampakatra horonantsary tao amin'ny fantsona YouTube-ny ​​amin'ny fomba fampiasana Siri hiaraha-miasa amin'ny asan'ny Play Music, ny fampiasana ny fanaraha-maso mikasika ny HomePod, hanararaotana ny asany rehetra sy ny, Ireo fanovana samihafa hitantsika ao amin'ny HomePod.
Voaray ny HomePods voalohany, Alex Gale, miovaova amin'ny famatsiana ara-bola ny vokatra sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Tapitra amin'ity alahady ity ny herinandro manontolo amin'ny volana faran'ny volana febroary ary amin'ny Mac aho dia tsy te hiala ...
Araka ny fanadihadiana iray, ny Apple Watch antsika dia afaka mamantatra diabeta miaraka amin'ny marina 85%
Eo afovoan'ny revolisiona ara-pitsaboana namboarin'i Apple manodidina ny fitaovan'ny orinasa, ary ...
Ny fametrahana fonosana amin'ny Mac dia dingana iray tena tsotra ary afaka segondra vitsy monja raha manaraka ny dingana rehetra asehontsika amin'ity lesona ity izahay.
Ny motera fikarohana Spotlight no fitaovana tsara indrindra anananay amin'ny macOS, fitaovana izay mety hijanona tsy hiasa na hanao azy tsy am-piheverana noho ny antony rehetra, manery antsika hanangana ny index-ny
Vokatra famandrihana Apple sy Squaring the Circle
Fomba fisainana fotsiny io, fa Apple dia mety manombana ny serivisy famandrihana tsy ny serivisy ihany, fa ny vokatra amidy koa.
Manana mpanara-maso 2 ho an'ny Mac ve ianao? Sokafy ny fisoratana anarana eo amin'ny monitor izay notendrenao taloha
Ary matetika tsy mahazatra ny fanaraha-maso roa ao an-trano hiara-miasa amin'ny Mac, saingy ...
Ny sasany AirPods may may any Florida
Vaovao tonga androany momba ny AirPods. Ireo kabary tsy misy tariby manjelanjelatra avy amin'ny orinasa miorina amin'ny Cupertino dia manana ...
Roa ambin'ny folo taona miala amin'ny iPod HiFi mankany HomePod
Fantatry ny rehetra fa ny fampitahana dia fankahalana, fa amin'ny tranga HomePod, tsy afaka manohy miresaka izahay ...
Efa tonga amin'ireo mpampiasa ny fanamafisana ny fandefasana HomePod
Hihaino tsara ny fantsona YouTube an'ny mpampiasa marobe izahay ary efa nanomboka nandray ...
Mandroso haingana ny fanamboarana ny Apple Store Walnut Creek
Mandroso haingana ny fanamboarana ny Apple Store Walnut Creek. Ao amin'ny foibe fiantsenana Broadway Plaza no misy azy ary ny endriny dia hitovy amin'ny ivon'ny mpitsidika an'i Apple Park.
Miomàna fa mihoatra ny 150 ny emoji vaovao ho avy amin'ny fahavaratra ho avy izao
Ary ny hoe ny emoji dia toa tsy misy fetra ary manodidina ny 150 ny emoji vaovao vonona ho ...
Manavao tanteraka ny fampiharana azy ho an'ny Apple TV i YouTube, na dia mitovy aza izany
Ny rindranasa YouTube ho an'ny Apple TV dia vao nohavaozina hanatsarana ny fahombiazany fa manome ny traikefan'ny mpampiasa mahatsiravina hatrizay.
Eddy Cue dia manamafy fa hanana fampahalalana bebe kokoa momba ny fandaharana Apple TV tsy ho ela isika
Eddy Cue dia nanatrika hetsika notontosaina tao Los Angeles avy amin'ny magazine Variety. Tao izy ireo dia niresaka momba ny HomePod sy ny fikasan'i Apple miaraka amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra
Showrunner Brian Fuller dia nandao ny famokarana Amazing Tales noho ny fahasamihafana misy eo amin'ny famoronana
Ilay mpamokatra fandaharana Brian Fuller dia tsy ho mpamokatra sy mpanoratra horonantsary amin'ny vanim-potoana vaovao an'ny Amazing Tales, andian-tantara izay zon'i Apple amin'izao fotoana izao.
Ny tahiry voalohany an'ny HomePod dia amidy any Etazonia
Rahampitso dia manomboka tonga any amin'ny mpanjifa nitahiry ny iray amin'ireto vokatra ireto ny HomePod voalohany ...
Efa manana ny kinova 49 an'ny browser Safari Technology Preview izahay
Manohy amin'ireo kinova vaovao an'ny fizahana fizahana Apple Safari Technology Preview izahay, ary ity dia andiany 49….
Ny HomePod dia tsy hanisa ny fetran'ny mpampiasa amin'ny Apple Music sy iTunes Device
Ny HomePod dia tsy hanisa ny isan'ny fitaovana betsaka indrindra ahafahantsika mihaino ny Apple Music. Ary koa, ny mozika alefa amin'ny HomePod dia tsy hesorina rehefa mihaino mozika amin'ny Mac.
Apple Pay dia nanampy banky sy trano fampindramambola vaovao mifanentana 26 toa an'i Apple Pay
Tsy mijanona ny milina Apple Pay, ary eo am-piandrasana ny fandefasana ity haitao fandoavam-bola any Brezila ity, manaraka ...
Vitsy ny sisa tavela ho an'ny HomePod amin'ny farany eny an-dalambe am-pelatanan'ny olona ana hetsiny….
Apple dia hifampiraharaha amin'ny Goldman Sachs na banky fampiasam-bola hafa, toe-javatra mahasoa kokoa ho an'ny mpanjifany ary hampisondrotra ny varotra.
Hanadihady ny Vondrona eropeana raha maharary amin'ny fifaninanana ny fividianana an'i Shazam an'i Apple
Efa ho roa volana aorian'ny nanamafisana ny fampitahana an'i Shazam an'i Apple, toa tsy nankasitraka izany fividianana izany ny firenena eropeana sasany, satria mety hisy fiantraikany amin'ny fifaninanana izany.
Tamin'ny andro toy ny androany tamin'ny 1981 dia nianjera tamin'ny fiaramanidina matotra i Steve Wozniak
Tamin'ny 7 Febroary 1981 izany, ary Steve Wozniak miaraka amin'ny sipany, Candi Clark, ny rahalahiny sy ny sakaizany ...
Ahoana ny fomba hanafenana ny fikandrana sy ny fampiharana tsy miasa amin'ny macOS
Ny fanamafisana ireo rindranasa rehetra izay tsy mihetsika eo amin'ny biraonay amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry dia asa tena tsotra sy haingana izay hamonjy antsika fotoana be dia be.
9 × 20 Podcast: Diso Apple amin'ny HomePod?
Apple dia naniry ny handefa ny mpandahateny HomePod vaovao ary ireo mpampiasa dia maniry ny hankafy azy io ao an-trano, ...
Apple Stores any China dia hanaiky ny fomba fandoavambola tokana an'i Shina, toy ny AliPay
Tao anatin'ny hetsika malina nataon'ny orinasa monina any Cupertino hanatsarana ny varotra ao amin'ny firenena aziatika sy ...
Apple dia manome alalana ny fampiasana Apple Pencil amin'ny Macs
Hofaranantsika anio miaraka amin'ny vaovaom-baovao izay mihoatra ny iray no ho faly amin'izany ary ...
Ny unboxing voalohany sy ny hevitra momba ny HomePod dia manomboka tonga
Toa i Apple dia nandroaka ny horonantsary YouTubers be mpanaraka indrindra tao amin'ny ...
Apple Park dia hitan'ny mason'ireo mpitsidika sy mpiasa ao aminy
Ary tsy hoe avy amin'ny sidina fiaramanidina fotsiny no ahafahanao "mitsidika" Apple Park, misy mpampiasa maro koa ...
Apple dia manakarama mpanao gazety Alex Gale hitarika ny ekipa mpanonta Apple, Beats 1 ary iTunes
Araka ny filazan'ny magazine Variety, Apple dia nanakarama ny tonian-dahatsoratr'i Alex Gale hanara-maso ny tsipika fanontana ho an'ny Apple Music, Beats 1 ary iTunes.
Ny maodely iMac Pro rehetra dia efa manolotra daty misy
Tara tara iray volana dia efa misy ny fandefasana iMac Pro iray manontolo amin'ny fandefasana azy, ao anatin'izany ny maodely 14-core, izay no farany nanana daty manokana handefasana.
Ahoana ny fampifanarahana ny efijery roa mifandraika amin'ny Mac amin'ny tiantsika
Ny fampiasana efijery roa mifandray amin'ny Mac, na monitor ivelany ho an'ny MacBook na mifandray mivantana ...
Mitohy ny drafitra fanavaozana ny Store Apple. Miankina amin'ny fivarotana Southlake any Texas izany.
Ny Apple Stores dia manaraka ny taha fanavaozana iray isan-kerinandro. Ny fanavaozana indrindra dia tanterahina ao amin'ny Apple Store alohan'ny taona 2009
Miova ny satan'ny HomePod ary miomana halefa
Ireo mpampiasa voalohany nitahiry ny HomePod any Angletera, dia nahita ny fiovan'ny satan'ny baikon'izy ireo ho "In Preparation", manakaiky ny ora fandefasana ilay fitaovana.
Mety ho volana an'ny vokatra Apple voalohany amin'ity taona 2018 ity ny volana martsa
Maika isika rehetra hahita izay ho zavatra voalohany hatolotr'i Apple amintsika amin'ity taona ity amin'ny resaka fitaovana vaovao, ...
Ampio geolocation ny sarinao avy amin'ny fampiharana Photos
Fampianarana momba ny fomba fampidirana geolocation an'ireo sary tsy ampy ao amin'ny fampiharana Photos. Hampiasa rakikira marani-tsaina izahay.
Ny daty fandefasana HomePod dia efa manomboka aorian'ny zoma 9 febroary izao
Fantatray fa hitranga io na ho ela na ho haingana ary izany dia ireo lahatsoratra an-jatony izay tototry ny tambajotra ...
HBO dia mahazo ny andian-dahatsoratra vaovao JJ Abrams
Ary farany, ny zava-drehetra dia toa nanondro fa ny zavatra niainan'ny HBO teo amin'ny tontolon'ny audiovisual dia namela azy hanana ny zon'ny andiany manaraka avy amin'ny talen'ny mpamokatra sy ny mpamokatra JJ Abrams.
Andramo anio, raha manana fampiharana 32-Mac ny Mac-nao
Azontsika fantarina anio raha toa ka mihodina amin'ny tontolo 64-bit fotsiny ireo rindranasa napetrakao amin'ny Mac, miaraka amin'ny maody 64-bit an'ny macOS
Apple dia afaka mahatratra ny Spotify amin'ity fahavaratra ity any Etazonia
Araka ny The Wall Street Journal, Apple Music dia mety hihoatra ny isan'ny mpanjifa Spotify any Etazonia amin'ity fahavaratra ity, raha ny tahan'ny fitomboan'ny roa tonta any Etazonia ankehitriny.
Manomboka ny fandinihana ny fahasalamana Apple, ho an'ny mpampiasa Apple Watch voasoratra anarana
Manomboka ny fianarana ara-pahasalamana an'ny Apple. Miara-miasa amin'ny Stanford University, manandrana manangona fihetsika ao am-po izy mba hisorohana ny aretina coronary.
Ny mpiasan'ny Apple dia afaka mividy ny HomePod miaraka amin'ny fihenam-bidy 50%
Tahaka ny fanao amin'ny fandefasana vokatra vaovao Apple vao haingana, ny orinasa dia manolotra fihenam-bidy 50% ho an'ny mpiasa rehetra mividy HomePod
Fanambarana HomePod, Dolby Vision ao amin'ny Apple TV 4K, iMac Pro, loharanom-pahalalana HomePod, valiny ara-bola Apple ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Indray Alahady indray dia tonga ny fanangonana vaovao an'i Soy de Mac. Tonga tao aorian'ny herinandro izay, ka ...
Vahaolana hamerenana amin'ny laoniny ny asan'ny copie copie amin'ny macOS. Tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny fiasa, na avy amin'ny monitor an'ny hetsika na amin'ny baiko avy amin'ny terminal.
Te hampiasa fitendry Windows amin'ny Mac ve ianao? Eto izahay no manome anao ny dingana mba hanovana azy miaraka amina fanovana kely miaraka amin'ny solo-sainao Apple
Manana Apple Pay amin'ny fomba ofisialy i Brezila amin'ity taona ity
Ary ny zava-nitranga dia volana roa lasa izay izahay dia niresaka tamin'ny hoe avy any Mac aho momba ny mety hipetrahan'ny Apple Pay ...
Ny anjaran'i Apple dia mijanona ho marin-toerana, taorian'ny fanavaozana ny fihenan'ny varotra tamin'ny telovolana faharoa
Ny fizarana Apple dia tsy nijaly tato anatin'ny ora vitsivitsy, na dia nanaiky aza izy ireo fa tsy ho tratra intsony ny valin'ny faran'ny telovolana farany.
AppleCare + dia misy any Aostralia sy Nouvelle Zélande
Ny drafitra fiarovana AppleCare + dia tonga tany Aostralia sy Nouvelle-Zélande, miaraka amin'i Etazonia sy Japon irery ihany no firenena misy azy io.
Youtube TV dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny Apple TV
Nandritra ny omaly dia natao ofisialy ny fandefasana ny fampiharana vaovao ho an'ny Apple TV ...
Toy izao ny valim-bola ara-bola nataon'i Apple tamin'ny telovolana voalohany
Apple dia nanambara ny valiny ara-bola amin'ny telovolana voalohany amin'ny taom-piasana 2018, nikatona tamin'ny 30 Desambra ...
Tonga ny benchmark iMac Pro 18-core voalohany.
18-core iMac Pro fandrefesana fampisehoana tanterahina. Ny isa Benchmark Multi-core dia mahatratra 50.000 XNUMX isa.
Ahoana ny fanavaozana ny rindrambaiko HomePod
Ny HomePod dia efa amidy amin'ny lisitry ny firenena tena mihena tokoa amin'ny ...
Ireo mpiasan'ny Apple Park dia mitady trano bebe kokoa any Cupertino
Ny tsy fisian'ny trano ao Cupertino dia manery an'i Apple hanandrana hanery ny filan-kevitry ny tanàna hanetsika ny takelaka ary hanandrana hanangana trano ho an'ny mpiasa ao aminy.
Ahoana ny fomba hamoronana mora foana ny sonia elektronika anao amin'ny macOS?
Andro vitsy lasa izay dia nila nanao sonia antontan-taratasy amin'ny Mac-ko sy ny fomba tsara kokoa anaovana azy io noho ny mivantana avy amin'ny ...
Podcast 9 × 19: Apple namely ny freins
Ny podcast TodoApple farany izao dia azo alaina ao amin'ny iTunes sy YouTube
Apple Store vaovao any Wina, Aostralia, amin'ity 24 Febroary ity
Ny 24 febroary, araka ny fikarohana nataon'ny manampahaizana manokana, hanokatra Apple Store vaovao i Apple ...
Ao amin'ny kinova macOS vaovao, ny fahombiazana dia hihoatra ny fiasa vaovao
Ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa dia hifantoka amin'ny fanamboarana bibikely, fanatsarana ny fahombiazana ary ny fitombanan'ny rafitra fiasa amin'ny ankapobeny, manoloana ireo fiasa vaovao marobe.
Apple dia manomboka mandefa iMac Pro amin'ny 18 core
Ireo tovolahy avy any Cupertino, dia nanomboka nanao ny fandefasana entana voalohany an'ny iMac Pro 18-core, raha mbola miandry ny modely 14-core kosa tsy misy vaovao momba ny mety hanombohana azy.
Ny telovolana farany tamin'ny 2017 no mety ho ny tsara indrindra tamin'ny tantaran'ny Apple teo amin'ny resaka varotra
Apple dia manolotra valiny amin'ny 1 Febroary ary araka ny mpandinika ny Wall Street, andrasana ny ampahefa-potoana tsara indrindra amin'ny lafiny fitadiavam-bola.
Ny sary voalohany amin'ny Apple Store manaraka ao Scottsdale dia voasivana
Asehonay aminao ny fandikana voalohany ny fomba hisy ny Apple Store manaraka izay hamoha ny varavarany ao Arizona, indrindra any Scottsdale, Apple Store izay tsy noforonin'ny studio maritrano mahazatra, Norman Foster
Milwaukee sy Omaha dia manolotra vaovao momba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps
Ny tanàna roa farany nanombohana naneho vaovao momba ny serivisy fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps dia Milwaukee sy Omaha, manampy tanàna 60 mahery hita ao amin'ny Apple Maps.
Eddy Cue, mpandaha-teny amin'ny hetsika horonantsary sy mozika, mety hiresaka momba ny Apple TV
Eddy Cue dia nasaina hanatrika ny hetsika SXSW malaza, iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra amin'ny sarimihetsika, mozika, haino aman-jery, kaonferansa ...
Efatra taona taorian'ny nanombohany, ny sehatra fandoavam-bola elektronika an'i Apple dia efa misy amin'ny mpivarotra 1 amin'ny 2 any Etazonia.
Fanavaozana ny Lightroom Classic ho an'ny kinova 7.2. Ity fanavaozana ity dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny zava-bita, indrindra amin'ireo masinina manana fahaizana kely kokoa.
Ireo magazay Apple roa manaraka izay hanova ny endrik'izy ireo amin'ny haingon-trano vaovao an'ny Apple Stores maoderina dia ireo any Nashville sy Lynnwood.
Apple dia nanao sonia an'i Dana Tuinier avy amin'ny Paramount Network
Apple dia manohy manao sonia ny departemanta atiny audiovisual ary miloka amin'ny atiny manokana. Tsaho fa naka ny tolotr'i Dana Tuinier izy, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny The Paramount Network
Mety nanam-po loatra ny fangatahana HomePod i Apple
Telo andro aorian'ny fisokafan'ny fe-potoana alohan'ny famandrihana HomePod, ity fitaovana ity dia mbola mampiseho ny ora fandefasana azy toy ny tamin'ny andro voalohany, mampiseho fa tsy mandeha tsara amin'ny vokatra ity Apple.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary dia nanatrika fihaonambe tao amin'ny ...
Famerenana ireo fifandraisana izay ananan'ny iMac Pro sy ireo tombony azon'ny tsirairay avy. Asongadinay ny fifandraisana 10 Gbps an'ny karatra Ethernet
Araka ny voalazan'i Bloomberg, Apple dia miasa amina Mac vaovao telo izay hatomboka eny an-tsena mandritra ny taona 2018, Macs izay hampiditra coprocessors vaovao novokarin'i Apple.